Tutorial amin'ny programa Arduino | Fitaovana maimaim-poana
Tutorial amin'ny fandaharana Arduino
Arduino Izy io angamba dia iray amin'ireo tetik'asa na sehatra rindrambaiko mahomby indrindra mahomby indrindra ary ilay nisy fiatraikany lehibe indrindra teo amin'ny tontolon'ny DIY. Ny vondrom-piarahamonina dia namorona rindrambaiko malalaka misokatra ho an'ny fandaharana ny microcontroller boards, ary koa ny takelaka fikirakirana samihafa afaka miasa miaraka ihany koa. Ireo rehetra nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU GPL ka ahafahana manana mpamorona sy derivatives marobe amin'izy ireo.
Raha ny marina dia nanaitra ny indostrian'ny elektronika iray manontolo niaraka tamin'ny kojakoja maro karazana izy ireo, satroka na ampinga Azonao atao ny manitatra ny fahaizan'ny birao Arduino mihoatra ny fampiasa fototra ampiasainy ho fenitra. Kit maro ihany koa no natomboka hanombohana na hanatanterahana tetikasa tena manokana, toy ny kit ho an'ny robotika, kit ho an'ny tetikasa misy angovo azo avy amin'ny masoandro, kitapo fanombohana sns.
1 Inona avy ireo karazana takelaka?
2 Inona no mila atomboko?
3 Tutorial amin'ny fandaharana Arduino:
3.1 Inona no tafiditra ao amin'ny fisie fisintomana?
3.2 Sintomy ny e-book sy ny add-on maimaim-poana:
Inona avy ireo karazana takelaka?
Misy izany birao Arduino ofisialy isan-karazany, na dia manomboka aza dia manoro hevitra aho ny hampiasa Arduino UNO, izay no ampiasaiko ho fototry ny fampianarana. Ireo takelaka samihafa misongadina indrindra dia:
Arduino UNO Apok3: io no lovia malefaka indrindra sy ampiasaina rehetra, ilay natoro anao hatomboka. Izy io dia manana microcontroller 328Mhz ATmega16, 2KB an'ny SRAM ary flash 32KB, tsimatra nomerika I / O 14 ary fampidirana analog 6.
Arduino: Manana microcontroller AT91SAM3X8E misy 84 Mhz, 96KB an'ny SRAM, ary flash 512 KB, hahafahanao manoratra programa sarotra kokoa ho an'ny tetikasa lehibe kokoa. Toy izany koa, hahita 54 fifandraisana I / O nomerika ianao ary fampidirana analog 12 + 2 output analog.
Arduino Mega: Microcontroller 2560Mhz ATmega16, 8KB an'ny SRAM, flash 256KB, tsimatra I / O nomerika 54 ary fampidirana analog 16. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ho modely antenantenany eo amin'ny due sy ny UNO, ho an'ireo tetik'asa manana fahasarotana antonony.
Arduino Lily: Takelaka madinidinika sy boribory izay azo ovaina amin'ny tetikasanao e-textile, izany hoe azo entina hitafy akanjo. Azo zahana izany.
ArduinoMicro: Izy io dia birao kely dia kely miaraka amina microcontroller izay mety mahasoa rehefa ny habaka dia singa iray manan-danja ary mila tabilao ianao izay mila toerana kely hampidirana azy ao anaty toerana kely iray. Misy ny kinova Pro misy ny fahaizany mivoatra. Izy io dia misy microcontroller 32Mhz ATmega4U16, ary pin 20 I / O izay tsy maintsy apetakao.
ArduinoNano: solaitrabe kely kokoa noho ny Micro aza izy io, saingy misy endri-javatra sy vidiny mitovy amin'izany, miaraka amina microcontroller ATmega328.
Arduino Esplora: Somary lafo kokoa noho ny ankamaroan'ny teo aloha, mifototra amin'ny Leonardo tany am-boalohany, manana fahaiza-manao mitovy amin'ny UNO ary izay no lovia voalohany niseho. Saingy ny endriny dia nohavaozina, nahena ary samy hafa satria nisy bokotra, mini-pifaliana ary fantsom-pifandraisana nampidirina mivantana. Noho izany, mahaliana ho an'ny tetikasan'ny lalao izany.
Ho hitanao ihany koa takelaka tsy ofisialy, noforonin'ny fiarahamonina na orinasa hafa. Ny mampiavaka azy dia mety hitovy, ary na dia mifanaraka amin'ny Arduino amin'ny resaka fandaharana na amin'ny sehatra elektronika aza, saingy efa avelanay ho solon'ny safidinao izany. Tsy mamporisika anao aho hanomboka amin'ireto tabilao derivative ireto amin'ny fomba rehetra, satria mety misy zavatra tsy mifanaraka ary tsy hahita fanampiana be dia be ianao. Ary koa, ny sasany amin'izy ireo dia tena manokana ho an'ny robotika, drôna, sns.
Etsy ankilany, manana ny kojakoja elektronika izay hanome ny birao Arduino misy fahaiza-manao fanampiny, toy ny fifandraisana WiFi, Bluetooth, mpamily hifehezana motera, sns. Ny sasany amin'ireo ampinga malaza indrindra dia:
Wi-Fi Shield: hanampiana fifandraisana WiFi ary hahafahana mampifandray ny tetikasanao amin'ny Internet hitantanana azy lavitra.
GSM Shield: ho an'ny fifandraisana data.
Ethernet Shield: fifandraisana an-tariby amin'ny tambajotra.
Ampinga Proto: mamela anao hampiasa tabilao fanaovana ny volanao.
Ary betsaka more, toy ny efijery, fitendry, ...
Amin'ny fitsipika, ho an'ny manomboka, Heveriko fa tsy mety liana amin'ity karazana singa ity ianao, na dia mety mila azy aza ianao any aoriana.
Inona no mila atomboko?
Hanomboka, Manoro hevitra anao aho haka ity fitaovana manaraka ity:
Starter an'ny Kit Arduino: kitapo fanombohana feno misy lovia izy Arduino UNO, boky iray feno tanteraka sy singa elektronika maro samihafa hiara-miasa (resistors, capacitor, efijery LED, fampisehoana, takelaka, LED, tariby, diode, transistors, buzzers, motera ary servomotor, mpamily sns.).
Raha misafidy ny hividy ny iray amin'ireo takelaka voalaza etsy ambony ianao dia tadidio fa tsy maintsy mahazo ilay ianao fitaovana elektrika ilaina ho an'ny tetikasa tsirairay amin'ny anao manokana any amin'ny magazay manokana… Azo atao koa raha vantany vao nanararaotra ny kitapo fanombohana ianao, dia liana amin'ny fividianana fitaovana bebe kokoa hanohizana hanitatra ny tetikasanao na hanao zavatra mihoatra ny famelana omen'ny kit anao.
Ankoatra ny ara-batana, mahaliana ihany koa raha manana rindrambaiko ampy ianao:
IDE Arduino: ianao dia afaka ampidino izany ho an'ny sehatra isan-karazany maimaimpoana tanteraka. Ao amin'ny tutorial PDF dia manazava ny fomba fametrahana azy amin'ny rafitra fiasa tsirairay sy ny fomba fiasany.
Ardublock: plugin iray hafa ao Java ho an'ny sehatra marobe izay mety ho navoaka afaka. Mamela anao hiasa amin'ny sary, izany hoe mampiasa sakana mitovy amin'ireo sanganasa piozila hananganana ny programa ataonao nefa tsy mila mampiasa ny fiteny fandaharana. Izany rehetra izany dia hazavaina ao amin'ny PDF ihany koa.
fritzing: dia programa iray ahafahanao manao simulateur na prototypes an'ny boriborinao alohan'ny hanangonana azy ireo. Tena mahaliana izy io ary ahitana singa marobe ao amin'ireo tranombokin'ny fitaovana. Ampidino eto izany.
Amin'izay dia hanana mihoatra ny ampy manomboka…
Tutorial amin'ny fandaharana Arduino:
Na dia efa niasa nandritra ny taona maro aza ilay sehatra, dia mety misy tanora maro na tsia loatra hamaky antsika ankehitriny ary te-hiditra amin'ny vondron'olona mpanamboatra izay misy mamorona tetikasa miorina amin'ny Arduino amin'izao fotoana izao. Noho izany, raha te hianatra hianatra fandaharana amin'ny alàlan'ny fanandramana sy tsikelikely ianao dia manome anao a ebook maimaim-poana amin'ny fandaharana Arduino. Amin'izany no hianaranao ny zavatra rehetra ilainao hanombohana ny fananganana ny endrika voalohany ...
Inona no tafiditra ao amin'ny fisie fisintomana?
Ao amin'ny Sintomy ny ZIP hahita rakitra maromaro hiara-miasa aminao ianao:
eBook miaraka amina tutorial Arduino IDE sy programa Ardublock amin'ny PDF fenitra hahafahana mampiasa azy amin'ny PC-nao.
Ny e-book dia mitovy amin'ilay teo aloha, fa manana habe kely kokoa sy maivana hampiasaina amin'ny findainao.
Misintona rohy miaraka amin'ny fandaharana ilaina.
Folder misy tsy mitovy fisie loharano sary azonao andramana ohatra na ovaina hianarana. Samy misy kaody ho an'ny Arduino IDE ary koa ny hafa ho an'ny Ardublock ary misy kaody aza raha hiara-miasa amin'ny Raspberry Pi.
Sintomy ny e-book sy ny add-on maimaim-poana:
Atombohy ny fisintomana Eto:
Manantena aho fa hanampy anao izany ary manomboka ho mpanamboatra ianao ireo tetikasanao voalohany. Azonao atao ny mamela ny fanehoan-kevitra amin'ny volanao voalohany ary mizara ny zavatra noforoninao taminay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Arduino » Tutorial amin'ny fandaharana Arduino
Mila manao TESTER ianao izay maka sanda roa amin'ny Capacitor sy fanoherana mifanandrify amin'ny tany C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, ity dia mifandray amin'ny input sy output 3.5 Jack AUDIO
Amin'ny alàlan'ny fanontaniana 3.5
Ny fanontaniana amin'ny arduino dia misy zavatra azo atao mba handrefesana sy hamoahana ny soatoavina,
Valiny tamin'i Tomas
Mario Piñones c. dia hoy izy:
Manomboka aho ary mikasa ny hahazo vokatra tsara
Valiny tamin'i Mario Piñones c.
Norberto dia hoy izy:
Tsy mandeha ny fampidinana EBOOK Arduino anao
Valiny tamin'i Norberto
hace Andro 6
Nanandrana fotsiny aho dia mety amiko izany. Marina fa misy dokambarotra mivoaka aloha.
Saingy amin'ny fanindroany dia tsindrio ny rohy alainy.
Arduino + relay module ary rock & roll: fampifangaroana AC / DC
Manaova fakantsary fantsonao manokana